KASHIFAAD: Waa Maxay sababta Ilkacase u soo karbaashay Madaxweyne Farmaajo? (Akhriso) | Garqaad News Agency
KASHIFAAD: Waa Maxay sababta Ilkacase u soo karbaashay Madaxweyne Farmaajo? (Akhriso)
“Madaxweyne wiil Fanaan ah oo waayadaan Xamar joogay baan damacnay inaan kuu keenno”
Markaas buu madaxweynuhu intuu soo jeestay oo Fadhiga kasoo yara hinqaday waa nin fan iyo suugaan jecele yiri: “War ma fannaaniintii waaberi baa mise hobolladii dhexe”?
Markaas baa loogu jawaabay: “Maya madaxweyne waa kuwii dambe”
Inta aayar fadhigiisii ugu laabtay ayuu yiri: “Bal heesihiisa itusa”.
Dhalinyaradii xog-haynta u ahayd madaxweynaha inta meel geeskaan ah Laptop usoo qaateen ayay youtube ka galeen oo ku qoreen “HEESAHA ILKACASE”.
Halkaan Hoose Ka Daawo Heesta oo Full Ah
Waxaa usoo baxay saf Heeso kala duwan ku jiraan, markaasay tii uhorraysay daareen, mise wuxuu fannaanku leeyahay: “Alla hooyooy ma iska ooyaa, Alla aaboow ma iska cararaa” iyo erayo oohin ubadan.
Raggii intay Naxeen ayay misana Hees kale oo ka hoosaysay ku dhufteen, iyana waxay leedahay: “Badoow been boode bootaale, baadoow maangaaab maangaab dhalay ma anaa iibooteenee” iyo erayo la mid ah oo lalabo ah.
Nimankii iyagoo yaaban oo ka xishoonaya madaxweynaha inay waxaan ugeeyaan ayay haddana Hees 3aad ku dhufteen iyagoo is leh tanaa dhaanta.
Heestii kalena wuxuu fannaanku ku heesayey “Ruuneey shacabkaaga Rux Rux Dabada Rux, Dib usoo siko waxa Raran jecliyaa” iyo erayo kasii waalan.
War waxba yaanan war idinku daaline Dhalin-yaradii xoghaynta madaxweynaha ahayd markay waayeen wax Hees ah oo micne leh oo uu Fanaanku qaaday bay isku af garteen meesha inaysan oollin Hees Madaxweynaha la dhagaysiiyo iyo Fannaan madaxweynaha loo geeyo midna, sidii bayna isaga daayeen oo Madaxeeynahana uga dhuunteen.
Hadda madaxwaynuhu Heesaha ilkacase in la tusuu sugayaa, Xog’
-hayeyaashiina heeso ay Madaxwaynaha tusaan bay waayeen oo madaxweynaha waayba ka dhuunteen. Halka fanaankii wali uu Xanaaqsanyahay oo uu u ku hayo maxaa Madaxwaynaha la iigu gayn waayey aan hal Sawir lasoo galee.